မြစ်ဝကျွန်းပေါ် - Bitcoin & Cryptocurrency Portfolio Tracker APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Apps ကပ » မြစ်ဝကျွန်းပေါ် - Bitcoin & Cryptocurrency Portfolio Tracker
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် - Bitcoin & Cryptocurrency Portfolio Tracker APK ကို
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကသင်၏ Bitcoin & cryptocurrency အစုစုကိုခြေရာခံနှင့်စျေးကွက် news.Track ခံယူ Bitcoin, Ethereum, ဂယက်ထ, Litecoin နှင့် 5000 ကျော် altcoins အပါအဝင်သင်ရွေးချယ်အားလုံး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းနှင့်သတိပေးချက်များ get ဖို့အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဒေသသုံးငွေကြေးများတွင် Real-time စျေးနှုန်းများနှင့်စျေးကွက်ဇယားရယူပါ။
သင်သည်သင်၏လာမည့် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ထွက်လက်လွတ်မသေချာစေရန်ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတင်းအရင်းအမြစ်များမှသတင်း updates များကိုရယူရန်။
တစ်ဦးကတစ်ချက်မှာΔ Portfolio - အမျိုးမျိုးသောအချိန်ကာလအတွင်းမှာသင့်ရဲ့စုစုပေါင်းအစုစုကိုချိန်ခွင်လျှာ, အမြတ် & ဆုံးရှုံးမှုတခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ သင်၏ဒေသသုံးငွေကြေးမသာအတွက်ဒါပေမဲ့မဆို Fiat နှင့် cryptocurrency ၌သင်တို့၏ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုကြည့်ပါ။
Δအသေးစိတ်အကြွေစေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - လက်ရှိစျေးနှုန်းဇယားစျေးကွက်ဦးထုပ်, volume မြင့်အနိမ့်, အမိန့်စာအုပ်, အတိမ်အနက်ကိုဇယား, သင့်ပိုင်ဆိုင်မှု, သင့်အမြတ်အစွန်း / အရှုံးကိုကြည့်ပါ။ စီမံကိန်းကိုက်ဘ်ဆိုက်, whitepaper နှင့်ပိုပြီး။
Δ watchlist & Marketing - ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ဒေတာနှင့်အတူဒင်္ဂါးပြား၏တစ်ဦးကအပြည့်အဝ coinmarketcap စတိုင်စာရင်းဖြစ်သည်။ သင်ရုံအချို့ဒင်္ဂါးပြားခြေရာခံစောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့စောငျ့ကွညျ့စာရငျးမှဒင်္ဂါးပြားထည့်ပါ။
ဒင်္ဂါးပြားΔကြီးမားသောစာကြည့်တိုက် - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, IOTA, Neo, Dash, Monero နှင့်များစွာသောပိုပြီးအပါအဝင် 5000 crypto ဒင်္ဂါးပြား, ကျော်စစ်မည်!
Δအစုစုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - သင်ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ဒင်္ဂါးပြား၏တည်နေရာ, အဖိုးအခပျက်ပြား, လူသုံးအများဆုံးဖလှယ်မှုနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်သင့်အစုစုသို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို (s) ကိုပေးခြင်းတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံ analytics ဒိုင်ခွက်။
Δ NEWS & မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တိုက်ရိုက် - သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဒင်္ဂါးပြားသည်အောက်ပါကကိုယ်ပိုင်သတင်း feed ကိုဖန်တီးပါ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုအသင်းများကိုသငျသညျကိုတိုက်ရိုက် updates များကိုပို့ပေးရန်များအတွက်ပွင့်လင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အရင်းအမြစ်မှရီးရဲလ်သတင်းများ, ။
Δ EXCHANGE & Wallet အချိတ်အဆက်တွေကိုအသုံးပြု - Sync ကိုသင့်ရဲ့အစုစုကိုအလိုအလျှောက်ဖလှယ်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်သင့် ETH, BTC, LTC, Neo နှင့်အခြားပိုက်ဆံအိတ်အလိုအလြောကျငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာတင်သွင်းဖို့အမှာစကားလင့်ထားသည်အားဖြင့်!
ကိရိယာများΔ SYNC & back-up အချက်အလက် - အကောင့်မရှိဘဲအလွယ်တကူ devices များအကြားသင့်ရဲ့ဒေတာကိုလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်! အလွယ်တကူ back-up, သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုကျနော်တို့ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူ QR ကုဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
Δ, PRICE Alert - တစ်ဦးချင်းစီ cryptocurrency များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအသိပေးချက်များတက်သတ်မှတ်မည်။ အကြွေစေ့ရဲ့စျေးနှုန်းသို့မဟုတ်သင့်အစုစုရဲ့တန်ဖိုးသိသိသာသာအပြောင်းအလဲများရှိပါသည်သည့်အခါနေ့စဉ်သတိပေးချက်များနှင့်အသိပေးချက်များကိုရယူပါ။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးအများစုအဆင့်မြင့်, သုံးစွဲဖို့အလွယ်ကူဆုံး, crypto အစုစု tracker ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှနောက်ထပ် app ကိုတိုးတက်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေအပေါ်သင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်။ ဒီတော့အောက်က channel များကိုမဆိုမှတဆင့်အဆက်အသွယ်ရရန်အခမဲ့ခံစားရ:
- ကြေးနန်း: https://telegram.delta.app
- ပျင်းရိ: https://slack.delta.app
- Facebook ကို: https://facebook.delta.app
- တွစ်တာ: https://twitter.delta.app
ထိုကဲ့သို့သော PRO သီးသန့်အစုစုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ module တွေ, ဖလှယ်မှုနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်မှန့်အသတ်ဆက်သွယ်မှုအသစ်များ features တွေနဲ့ပိုပြီးစောစောလက်လှမ်းအဖြစ်အပိုဆောင်းအခွင့်အရေး, ပါဝင်သည်သောမြစ်ဝကျွန်းပေါ် PRO subscription ကိုလည်းရှိပါတယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုမရောင်းပါဘူး။ မဟုတ်ယခုမဟုတ်ဘဲအစဉ်အဆက်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 2.1 - ဤ update ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ PRO အသုံးပြုသူများအတွက်အထူးပါ!
- တိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းများ: ငါတို့သည် PRO အသုံးပြုသူများအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစျေးနှုန်းများမိတ်ဆက်ပျော်ရွှင်နေကြသည်, ဒါကြောင့်သင်နောက်တဖန်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်အောက်သို့ဆွဲရန်ရှိသည်ဘူး!
- နယူးလဲလှယ် & ပိုက်ဆံအိတ်ဆက်သွယ်မှု: ထိုကဲ့သို့သော Bit-Z, OKEX, CEX နှင့် Yobit အဖြစ်ပိုပြီးလဲလှယ်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ကြယ်များအတွက်ပိုက်ဆံအိတ်ဆက်သွယ်မှု, VeChain, EOS နှင့် XRP အစောပိုင်းလက်လှမ်း၌ရှိကြ၏။
ကျွန်တော်တို့ကို supporting များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် - Bitcoin & Cryptocurrency Portfolio Tracker
24.81 ကို MB
opus Labs က။
အကြွေစေ့ Stats ကတော့ - ...
ESPN အားကစား App ကိုသင်ခန်းစာ
MSN ကို Money- စတော့အိတ် ...